विद्यालयमा तपाईको बच्चा कति सुरक्षित छ ?Samachar Pati
केही दिनयता विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि भएको ज्यादतीबारे समाचार आइरहेका छन् । गृहकार्य नगरेको भन्दै एक विद्यार्थीलाई शिक्षकले निर्घात कुटपिट गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ ।
यी त भए सतहका घटना । विद्यालयमा आफ्नो भविष्य बनाउन पठाइएका बालबालिकामाथि यस्तो दुव्र्यवहार हुँदा अभिभावकलाई कस्तो लाग्दो हो ? हरेक अभिभावकको लागि सोचनीय विषय हो यो । तर, बालबच्चामाथि भइरहेका सबै किसिममा ज्यादती सतहमा आउँदैनन् । देखिदैनन् ।
विद्यालयमा हुने बुलिङको रूपमा विद्यालय परिसरमा हुने बुलिङलाई लिइन्छ । त्यसमा एकले अर्कोलाई गर्ने बुलिङ, ठूलाले साना बच्चालाई गर्ने बुलिङ, शिक्षकले गर्ने बुलिङ र शिक्षकमाथि हुने बुलिङ आदि सबै पर्छन् ।
नेसनल सेन्टर फर एजुकेसनल स्टाटिस्टिक्सका अनुसार १२ देखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरूमध्ये एक तिहाइलाई विद्यालयमा बुलिङ हुने गरेको छ । यो सामग्रीमा हामीले विद्यालयमा हुने बुलिङको बारेमा केही तथ्य उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।
प्याक बुलिङ भनेको समूहले गर्ने बुलिङ हो । अष्ट्रेलियामा गरिएको एक अध्ययन अनुसार प्याक बुलिङ विद्यालयहरूमा अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको छ र यो व्यक्तिगत बुलिङभन्दा धेरै लामो समयसम्म चलिरहन्छ ।
प्याक बुलिङमा शारीरिक, भावनात्मक बुलिङ वा साइबर बुलिङ पर्छन् । यस्तो बुलिङ विद्यालयको चौरमा, विद्यालयको हलवेमा, भर्‍याङमा, खेलमैदानमा, जिमखानामा, कक्षाकोठामा वा स्कूल बसमा पनि हुनसक्छ ।
व्यक्तिगत बुलिङ भनेको एकले अर्कोलाई गर्ने (वान-अन-वान) बुलिङ हो । जुन अनलाइन मार्फत, प्रत्यक्ष गरिने शारीरिक वा भावनात्मक बुलिङ हुनसक्छ । सन् २००९ मा अष्टे्रेलियामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार यो प्राथमिक विद्यालयमा धेरै हुने गरेको छ ।
व्यक्तिगत बुलिङ प्याक बुलिङ हुने जुनसुकै स्थानमा पनि हुनसक्छ र प्याक बुलिङ नहुने सानो क्षेत्र जस्तै बाथरुममा पनि हुनसक्छ ।
कसरी हुन्छ बुलिङ ?
भौतिक बुलिङमा शारीरिक दुव्र्यवहार, सजाय दिने, धकेल्ने, पिट्ने, थुक्ने झगडा गर्नेजस्ता कार्यहरू पर्छन् । त्यस्तै शारीरिक हानि गर्ने किसिमका धम्की दिने र जबरजस्ती केही कार्यहरू गर्न लगाउने पनि यसैमा पर्छन् ।
भावनात्मक बुलिङमा कसैलाई होच्याउने, कसैलाई नराम्रो नाम राखेर बोलाउने, नराम्रो प्रतिक्रिया दिने, जिस्क्याउने, गालीगलौज गर्ने आदि कुरा पर्छन् । यसमा पीडितलाई बहिष्कार गर्ने प्रयास पनि पर्छ । जस्तैः एक्लै छोडिदिने वा वास्ता नगर्ने आदि ।
भावनात्मक रूपमा गरिने बुलिङमा कसैको सामान लुकाइदिने वा अर्कै ठाउँमा राखिदिने कामहरू पनि हुन्छन् । भावनात्मक बुलिङ प्रत्यक्ष रूपमा वा साइबर बुलिङको माध्यमले पनि हुनसक्छ ।
अनलाइन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा गरिने बुलिङमा इमेल, च्याट रुम, सामाजिक सञ्जाल, टेक्स्ट म्यासेज, इन्स्ट्यान्ट म्यासेज, वेवसाइट पोस्टिङ वा ब्लग आदिको माध्यमबाट हुन्छ । साइबर बुलिङकर्ताले आफ्नो परिचय लुकाउन सक्छन् र पीडितले अज्ञात आक्रमणको रूपमा त्यस्तो बुलिङ खेप्न सक्छन् । साइबर बुलिङमा इमोसनल बुलिङमा हुने सबै थोक पर्छन् ।
-बुलिङबाट ६ कक्षामा पढ्नेहरूलाई धेरै शारीरिक चोट लाग्ने, ८-९ पढ्नेलाई अलि कम र हाइस्कूलकालाई निकै कम चोट लाग्ने गरेको छ ।
सुनिल रावलको चलचित्रमै प्रेम बस्यो
यी ४ राशि भएका मानिसहरुमा एक खास खुवी हुन्छ !! जन्नुहोस ति राशिहरुको बारेमा
बच्चाको लागि साथी बन्ने कि अभिभावक ?